Maitiro ekuongorora nhetembo, zvakakosha zvinhu zvaunofanira kuziva | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Vanyori, Nhetembo, dzakawanda
Chikamu chedetembo naMiguel Hernández.
Kubva pane zvinyorwa zvedzidzo zvekuona, Kuziva matanho ekutevera kuziva kuziva ongororo yenhetembo kwakakosha. Parizvino, ese marudzi emabasa anowanzo kuwanikwa pa internet, kubva pane zvisina kurongwa zvewebhu zvinyorwa kusvika kumagwaro edzidziso mumagazini akanyorwa. Dzese dzinowanzoenderana pane imwechete pfungwa: nhetembo rudzi rwemazwi enhetembo akarongeka mundima.
Naizvozvo, kana uchiongorora nhetembo Izvo zvakakosha kuti uongorore tsananguro senge: stanza, lyrical chinhu, mutinhimira, synalepha, syneresis, pakati pevamwe. Nenzira iyi, nhetembo dzinogona kupatsanurwa, kuturikirwa uye “kuyerwa”. Ehezve, pasina kunyepedzera kuumba nzira imwe, nekuti runyorwa rwakanyorwa kubva mukufemerwa nguva dzose rine mutoro wakakura kuzviisa pasi kune avo vanoriverenga.
1.2 Zvemukati nekududzira
1.3 Zvinhu zve lyrical genre
1.3.1 Lyrical chinhu:
1.3.2 Mutauri wechiRyrical:
1.3.3 Maitiro ekunyengera:
1.3.4 Lyrical kufamba kana theme:
1.3.5 Kwemanzwiro hasha:
1.4 Kuyera kwendima
1.4.4 Mutemo wekupedzisira wekupedzisira:
2 Kuziva kwezvinhu izvi kunotungamira kukunzwisisa kuzere
Nhetembo ndiwo maitiro kana maitiro enhetembo ongororo. Izvo zvinoenderana nekutsvaga zvinhu zvakakosha mukati mechimiro chenhetembo. Nepo nhetembo ichifanirwa kunzwisiswa zvakanyanya seyakazara, kunakirwa kwayo hakubve mukutyora zvikamu zvayo kuti zviongororwe zvizere. Nekuti, shure kwezvose, nhetembo kuratidzwa kwerunako kuburikidza nemazwi akanyorwa.
Kunyangwe hazvo ese asiri maratidziro epamusoro pazvinouya munhetembo, nhetembo dzinokurudzirwa nekutya kana kutya hazvigone kufuratirwa. Chero zvazvingaitika, mazhinji epic mune zvakasikwa, ane mazwi awo anogona kuratidza kukwidziridzwa kana kunoshamisa, kudanana uye kushamwaridzana kuratidzira. Nhetembo dzinovakirwa pane zvinotevera pfungwa:
Iko kuongorora kwechimiro kunotsvaga kuronga nhetembo (mu sonnet, ode, kudanana ...), pamwe nekuona mhando yemastanzas (quatrain, limerick, yechisere kana yegumi). Saizvozvowo, kuenzanisira kunosanganisira mutinhimira (izwi rinoreva kana izwi rinowirirana), lexicon (mazwi akakosha, kushandiswa kwemazita, zvipikisheni) uye zviwanikwa zvekunyora (munhu, madimikira, onomatopoeia, anaphora).
Izvo ndezve chinangwa kana chinhu chekunyora. Mubvunzo wakakosha ndewekuti: chii chinyorwa chemudetembo? Saka, "sei" mugashiri anonzwisisa zvinoreva basa racho zvinonamira zvakananga pamutsara werondedzero wakagadzirwa nemunyori. Zvinokosha panguva ino kugona kwemunyori kumutsa manzwiro, mifananidzo, manzwiro - uye kunyangwe intuition - muverengi, kuburikidza nemifananidziro kana antitheses.
Kushandiswa kwe zviwanikwa zvekunyora kunofanira kuenderana nedingindira renhetembo. Zvakajairika pamabasa anotyisa kwazvo kuve iwo anoratidza mamiriro enyanduri. Kunyangwe kureva mhuri, kusurukirwa kana kurarama.
Zvinhu zve lyrical genre
Ndiye iye munhu, chimiro kana mamiriro ezvinhu achikonzera manzwiro mudetembo izwi. Iyo inowanzo ine inobatika, chaiyo uye yekongiri mareferensi (chipenyu kana chimwe chinhu, semuenzaniso).
Iri izwi renhetembo, rakaburitswa nemunyori. Inogona zvakare kuve izwi remunhu asiri iye munyori mukati mekunyorwa kwezvinyorwa. Taura manzwiro uye nemanzwiro kubva mukati mepfungwa mukati mepasi rebasa.
Chimiro kana nzira yekuburitsa pfungwa mukati medetembo kutsanangura chokwadi. Unogona kuva:
Enunciative: kana mutauri wengoma achireva mune wekutanga kana wechitatu munhu kune mamiriro kana chinhu chekunze kwaari.
Apostrophic: uko mutauri wenziyo anonongedzera kune wechipiri munhu (kududzira) uko kunogona kana kusingawirirane nechinhu chine rwiyo.
Carmine: kana kuratidzwa kweanotaura mutauri kunobva kune wega zvemukati. Iyo inowanzo iri mumunhu wekutanga uye ine yakamisikidzwa kuzviisa pasi maonero.
Lyrical kufamba kana theme:
Inomiririra mamiriro, marongero, pfungwa uye manzwiro anoita kuti nyanduri anzwisise.
Icho chinoreva mafungiro emanzwiro anoratidzwa nanyanduri. Izvi zvinogona kuratidza kusuwa, kana mufaro. Hasha, kutsamwa, kana kutya zvakajairika.
Huwandu hwemashiripiti mundima yega yega hunosarudza kana vari eunyanzvi hushoma (iine masirbhuru masere kana zvishoma. Zvakare kana zviri zvehunyanzvi hukuru (zvipfumbamwe kana kupfuura metric syllables). Saizvozvo, inofanirwa kutariswa kana umlauts, synalephas kana syneresis zvichionekwa. Izvi zvinhu zvinoshandura huwandu hwesirabhasi kuverenga.
Kuparadzaniswa kwemawowel kunowanzove syllable imwechete. Izvi zvinogadzira shanduko mukududzira kwakajairika kweshoko. Iyo inoratidzirwa nekoloni (umlaut), pane yakashata isina simba vhawero (ï, ü), sezvinoonekwa mundima inotevera naFray Luis de León:
Uyo anechaiyo iye mund-da-nal rü-i-do.
Kubatana kwemaviri mavhawero akasimba emazwi maviri akasiyana kubva mugirama yekuona. Muenzaniso unogona kuonekwa mundima inotevera ye14 metric syllables (alejandrino) naJosé Asunción Silva:
Na mo-vi-mien-kune rhythm-mi-co iye da-lan-cea they mukomana.
Kuumbwa kwesimbi yemetric kubva pamaviri kana anopfuura mavhawero emamwe mazwi. Zvinogona kutoitika nechiratidzo chematsetse pakati. Semuenzaniso (octosyllable ndima ye espronceda):
Mhepo-kupinda po-pa, ku ku-da kuzviona.
Mutemo wekupedzisira wekupedzisira:
Zvinoenderana nesirabhu yakasimbiswa yeshoko rekupedzisira, syllables yemetric akawedzerwa kana kubviswa kubva pahuwandu hwendima. Kana izwi rakapinza, rinowedzerwa; kana iri spruce, imwe inobviswa; kana chiri chakakomba, chinoramba chiripo.
Kana uchiongorora nhetembo rimwe rematanho akakosha kutarisa mhando yemaitirwe emazwi ekupedzisira endima yega yega. Kana ichipindirana mumavhawero nemakonzonendi, inonzi "makonzonendi." Saizvozvowo, iyo inonzi "yakakwana consonant" kana mazwi akasimbiswa achienderanawo. Sezvinoonekwa mune chinotevera chidimbu che Miguel Hernandez:
... "Vashanu vashanu mukatiero
Ndira wega wega akaisaakaenda
shangu dzangu dzichaendaero
Pane kudaro, apo mavhawero ekupedzisira chete anowirirana murwiyo, inonzi «assonance». Muchidimbu chinotevera naAntonio Machado, mhando yerwiyo inoonekwa pakati pevhesi 2 ne4:
Sinou inowira mukutendereraino.
Iyo Alvargonzález wachi
moto wakada kudzimaido".
Chimwe chezvinhu zvakakosha pakuongorora nhetembo hunhu hwematan'a. Izvo zvinorongwa zvinoenderana nenhamba uye nekureba kwendima. Kunzwisisa nedanho "boka remavhesi ane mutinhimira uye mutinhimira". Izvi zvinotevera mhando dzakasiyana dze stanzas:
Paired (maviri-mutsara stanzas)
Matanho emitsara mina:
Zvikamu zvishanu zvemitsara:
Matanho emitsetse mitanhatu:
Yakaputsika tsoka couplet.
Copla de Arte Meya.
Zvikamu gumi zvemitsara:
Stanzas isina yakatarwa nhamba yemavhesi:
Kuziva kwezvinhu izvi kunotungamira kukunzwisisa kuzere
Nzwisisa uye Kudzidza nenzira yehunyanzvi chimwe nechimwe chezvinhu zvinotsanangurwa pano chinovhura musuwo muhombe kune avo vane chinangwa chekufunda nhetembo. Kunyangwe iri genre rinoenderana zvakanyanya nekuzviisa pasi, kuziva ese mativi anopindira mukugadzirwa kwayo kiyi yekuwana mabasa anorema anosangana neanodikanwa kujekesa uye ane meseji inosvika kune vaverengi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Maitiro ekuongorora nhetembo
Sei kunyora bhuku